IMac Mini ayifanga, phila ixesha elide iMac mini | Ndisuka mac
IMac Mini ayifanga, phila ixesha elide iMac mini
Xa kwakubonakala ngathi iApple icwangcisa ukuyeka iMac mini, okanye ke kubonakala ngathi azikho iindaba, kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, Umphathi we-Apple ngokwakhe uthetha ngenxalenye ebalulekileyo yekamva lika-Apple. Ezi ziindaba ezimnandi kubasebenzisi abaninzi beMac abonwabela iMac mini yabo yangoku, ngenxa yokuguquguquka kwesi sixhobo. Ukukhetha kwescreen, ukuthwala, njl. kwaye kunjalo, ikwasebenza njengesincomo kumhlobo ofuna ukuzama iMac, kodwa akafuni ukutyala imali eninzi ngaphambi kokwazi ukuba iyamenelisa.
Justo Sele kuyiminyaka emithathu kuhlaziyiwe okokugqibela yeMac mini. Ukuphuma ngaphandle kwamathandabuzo, umsebenzisi ubhale nge-imeyile kuTim Cook ngokwakhe (kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo uCook ngokwakhe uphawule ukuba uyathanda ukufunda ii-imeyile zomsebenzisi kuqala ekuseni) kwaye uphendule wathi "ibingeloxesha lokwabelana ngalo naziphi na iinkcukacha "Kodwa iqinisekisile ukuba iMac mini iyakuba yinxalenye ebalulekileyo yemveliso yenkampani kwixa elizayo.
Ayisiyonto eyodlula isiqinisekiso kwinxalenye yokuqhubeka kweMac mini. Kwiiveki ezidlulileyo, eyakhe Phil Schiller Usilindele kwangaphambili:
IMac mini yimveliso ebalulekileyo kumgca wethu kwaye khange siyikhankanye kuba sisebenzela ukwenza imveliso engumxube wosetyenziso lwasekhaya kunye nokusetyenziswa kobungcali.
Ngokucacileyo, umatshini ufuna uhlaziyo njengoko kufanelekile, kuba nangona uninzi lwabasebenzisi lutshintshe naliphi na icandelo elinokuphuculwa, Inguqulelo yangoku idibanise iiprosesa zeHaswell kunye neIntel HD 5000.
Ngokuqhubela phambili kwezobuchwephesha, kuya kubakho ukubona kwixesha elizayo Encinci iMac mini, usondela kubungakanani beApple TV. Nangona kunjalo, asinazo naziphi na amarhe malunga nokuhlaziywa kwesixhobo esitsha, ke ngoko asilindelanga izixhobo ezitsha kude kube kwikota yokuqala ka-2018. Kuba silinde ixesha elide, ubuncinci izixhobo kufuneka ukuphucula iichips zeLake Kaby Lake.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IMac Mini ayifanga, phila ixesha elide iMac mini
I-Apple Watch LTE e-China iyeka ukusebenza
IPodcast 9 × 07: IApple imamela abasebenzisi kwaye ilungise